Bandhiga Barafka ee Mesudiye wuxuu qabtay xaflado badan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Bandhiga Barafka ee Mesudiye wuxuu qabtay xaflado badan
20 / 01 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
dabaaldega barafka mesudiye ayaa goob joog u ahaa dhacdooyin badan
Dabaaldegyada ayaa sii wadaya in lagu abaabulo magaalada Ordu si loo wanaajiyo isboortiga jiilaalka iyo dalxiiska jiilaalka.
Macnaha guud, Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu, Dowlada Hoose ee Mesudiye iyo Maamulka Degmadda Mesudiye ayaa abaabushay Bandhigga 5-aad ee Mesudiye Snow Festival ee Keyfalan-Ulugöl Plateau. Hawlo ay ka mid yihiin doon yar yar yar, baraf baraf ah, ciyaar ciyaar, jilif, iyo sled ayaa lagu qabtay xafladda. Tartanka eyga adhijir ayaa la qabtay. Markii dambe, xubnihii borotokoolka iyo muwaadiniintii ka soo qeybgashay xafladda waxay socod qiiro leh u fidiyeen shahiidyadii Sarıkamış. Bandhiga barafka, oo ah goobta sawirada midabada leh, halays ayaa lagu toogtay muusig, sausiyadaana waxaa kariyay dabka. Qof kasta oo ka socda 7 ilaa 70 ka qeyb galaya xafladda ayaa ku farxay farxadda barafka.
“BOQOLKAADA AMNIGA AH EE PARADISE”
Isagoo cadeeyay in Ordu ay tahay magaalo ay ku noolyihiin afar xilli, Duqa Magaalada Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, Waxaan sii wadnaa dabaaldegyada magaaladeena iyada oo halku dhiggii Ordu aanu ahayn 3 bilood laakiin 12 bilood ah. Muwaadiniinteena ayaa yimaada Ordu xagaaga kaliya, iyagoo aruurinaya nuts. Intaa kadib, waxaan noolaan doonnaa Ordu afar xilli. Markaan nidhaahno Çambaşı iyo dabbaaldega barafka Aybastı, waxaan joognaa maanta Mesudiye. Waxaan soo bandhigi doonaa Ulugöl-Keyfalan Plateau oo ay weheliso saxanka kale ee Ordu. Ciidankeenu waa janno go'an. Waxaan ku bari doonaa kaliya ma ahan cagaaran kaliya laakiin sidoo kale xaaskooda. Halkan waxaan ku leeyihiin huuri la kaararka diiwaangelinta sida ugu horeysay ee Turkey. Anaga iyo asxaabteena geesiga ah iyo shacabka, waxaan u helnay safar qurux badan oo macno ku fadhiya shahiiday our Sarıkamış. Waxaan dooneynay inaan tusno in umada Turkiga ay rabaan inay ku noolaadaan dagaalka iyo nabadda labadaba. Waxaan arki doonnaa quruxda Mesudiye bil kasta. Waxaan soo bandhigi doonaa wax walba oo aan halkaan ku soo bandhigi karno. Dhoola caddeyntaada ugu weyni waa yoolkayaga ugu weyn. Ciidammadeenna waxay noqon doonaan xarun soo jiidasho leh dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay. Mesudiye wuxuu noqon doonaa xiddig soo kacaya oo leh xoolaha, beeraha iyo Badda Madow ee Badda Madoow. Dunida oo dhami waa inay aragtaa quruxdaas oo dhan. ”
Ankara Asphalt Money Suuqa Degmada Kankaya
Ford Puma Titanium X Waxay Ka Hawl Galaysaa Magaalada Frankfurt
Konak Tunnell waxay waxyeeleeyeen guryo badan
Taha Aydin hal halna
Nadaamka Malatya Trolleybus wuxuu la socdaa magaalooyin badan
Mediterranean-Road Black Sea
Dawlada Hoose ee Mesudiye
Bandhigga Barafka ee Mesudiye